7 Waxyaabood Waligaa Haku samaynin Baraha Bulshada - MURAAYAD.COM
Baraha bulshadu waa shay siyaabo kala duwan oo badan loo adeegsan karo loona adeegsado Dafka qaar waxay kula wadaagaan bulshada fikirada u gaarka ah kadibna dad fikirkaas la wadaaga ayey helaan, waana wax wanaagsan inaad hesho cid kula mid ah, balse waxaa jira waxyaabo aan la samaynin inta aad isticaamalyso hadaad samaysana aad ka shalaayo karto.
1. Aqoonsigaaga shakhsiyadeed oo aad soo dhigto
Aamin ama ha aaminin balse waxaad leedahay asxaab qarsoon ama dad ku jecel oo aadan ogayn iyo sidoo kale cadow qarsoon, waxaa kaloo jira tuugo iyo dad xogta dadka kale u adeegsada siyaabo aan wanaagsanayn saas darteed inaad aqoonsigaaga saxda ah sida guriga aad degantahay, taleefan nambarkaaga, sawir ama muuqaal muujinaya shacigaaga, Email kaaga iyo waxaayaabaha lamidka ah soo dhigtaa; caqli wanaagsan ma aha.
Tusaale hadii aad tahay qof baraha bulshada ku badan waxaad tahay qof ay dad badan yaqaanaan balse asagu aan dadkaa wada aqoon saas darteed waxaa kamid noqon kara dadkaas tuug aad tilmaanta gurigaaga kula wadaagtay baraha bulshada kaasoo ugu yaraan ku dhici ama xadi kara hadiiba uunan dhib kale kuu gaysan.
Email kaagu waa nus ama 50% wixii aad u adeegsan lahayd galitaankiisa waxàana ku xariira waxyaabo badan. Tusaalaha ugu yar; sawirada iyo muuqaalada kuugu jira taleefankaaga waxay sidoo kale ku jiraan Email kaaga Saas darteed qofkii awooda inuu galo Email kaaga dhamaan wuxuu helayaa xogtaas siduu doonana wuu u adeegsan karaa saas darteed hubso Email-ka aad dadka la wadaagayso in aanu ku xirnayn wax kale.
Tusaalayaashan aan soo qaadanay waa kuwa ugu halista yar, hadaba hasoo dhigin baraha bulshada xogtaada hoose.
2. Dareenkaaga oo kacsan inaad baraha bulshada wax soo dhigto
Cadawgeena ugu weyn waa dareenkeena, Xanaaqa maseerka, murugada, farxadda xad dhaafka ah, nacaybka, jacaylka…. iwm dhamaan dareenadan iyo kuwa kale oo aanan halakan kuwada xusi karin waxay ka simanyihiin inay damiyaan muddo kooban qayb kamid ah maskaxdaada oo wax qiimaysa.
Xataa hadii aad ka daba tagto wixii aad baraha bulshada ku halgaadday oo aad tirto waxaad ogaataa inay kugu filantahay qof inuu sawirto ama dagsado wixii aad soo dhigtay saas darteed maanka ku hay marka aad wax dhigayso baraha bulshada dadkan hoos ku xusan inay arkayaan iyo in kale.
Kuwa kula dhashay
Qofka aad u shaqayso iyo kuwa aad isla shaqaysaan
Kuwa aad wax isla barataan
Kuwa ku neceb balse aad baraha bulshada isku arki kartaan
Iyo dad shisheeye oo aydan wazba wadaagi
3- Ha sharrixin dareenkaaga
Baraha bulshada haku sheegin xogta ku saabsan dareenkaaga jinsiyadeed iyo waxyaabaha gaarka kuu ah ee ku saabsan noloshaada dhinaca dareenka.
Tusaale ahaan, hasoo bandhigin marka aad qabto baahi xaga gogosha ah, ama hasoo galinin sawirro iyo muuqaallo aan asturneyn.
Qaar ka mid ah shirkadaha baraha bulshada xitaa ma oggola in lagu soo bandhigo xogta noocan ah.
Diin ahaanna ma bannaana in macluumaadkan si shaac baxsan loola wadaago bulshada.
4- Sheekooyinka khaaska ah haku sheegin meel loo jeedo
Marka uu qof aad saaxiib ku tihiin baraha buslahada soo dhigo sawir ama muuqaal, qaybta comment-ga haku sheegin waxyaabo loo baahnaa inay khaas noqdaan.
Dabcan waxaa jirta qayb loogu talogalay sheekooyinkaas, oo farriin ahaan aad ugu diri karto qofka aad rabto.
Waxaa jira dad aan kala soocin farriimaha gaarka ah iyo kuwa bulshada oo dhan ay u jeeddo, sidaas awgeed haka mid noqonin dadkaas.
5- Wax aadan ka fiirsanin hasoo galinin
Qoraal kasta ama sawir walba oo aad soo galinayso baraha bulshada waa in uu ahaado mid aad ka fikirtay, kana baaraan degtay, adigoo sii qiimaynaya waxa ka imaan kara.
Internet-ka waxba ma cafiyo, waxbana ma hilmaamo, marka taas waa inaad xisaabta ku darsatid.
Labo jeer iyo ka badan ka fikir waxyaabaha aad adduunka la wadaagaysid, gaar ahaan marka ay soo bandhigayaan xogtaada gaarka ah iyo arrimaha kale ee idin dhex maray adiga iyo qof kale.
6- Qof haku xamanin
Baraha ay dadka ku wada jiraan ama aad qof kale kula sheekeysanayso haku sheegin wax uu dhibsan karo qof kale.
Waxaa ka mid ah group-yada whatsApp iyo facebook, kuwaasoo mararka qaar ay dadka si khaldan uga sheegeystaan waxyaabo weerar ku ah qof kale ama koox.
Ogow in qoraalladaas ay yihiin kuwo meel walba gaari kara, adigana aadan waxba ka qaban karin mar haddii ay farahaaga ka baxaan.
7- Ha fashilin wada sheekeysiga
Waligaa baraha bulshada ha soo dhigin Screenshot aad ka qaadday sheeko idin dhex martay qof kale, gaar ahaan marka ay abuuri karto khilaaf iyo in qofkii kale uu ku dhibsado.
Xitaa haddii aad qofkaas isku dhacdeen, ma habboona in sheekadiinnii aad shacabka la wadaagto.
Tani waxay meesha ka saaraysaa in heshiis lagu gaaro si sahlan, ama dib loo xalliyo arrintii xumaatay, sababtoo ah ma jiro qof dib u sixi kara khaladkii aad ku sameysay dhinaca internet-ka, mar walbana wuxuu ahaanayaa xasuus murugo leh.